“Goa’aanka Maxkamadda Sare Wuu Cad Yahay….” Cali Guray – somalilandtoday.com
Gunta iyo gebogebada Go’aanka Maxkamadda Sare wuxu ku dhan yahay qodobka 6aad oo faraya dhamaan dhinacyada ay khusayso in ay u hogaansamaan Dastuurka, xeerarka dalka, iyo xeerarka doorashooyinka.
Marka qodobka sare laga duulayo furista iyo kala reebidda ururada cusub ee doorashada (Xisbiyada iyo Ururada) ka qaybgeli doona waxa loo raacayaa Xeer Lam.14 wax ka bedelkiisa 2011. Marka ay sidaa tahay goorma ayay sharci tahay furista ururada cusubi? Waxay sharci tahay 26 June 2022. Goorma ayay ururada buuxiya shuruuduhu ay doorashada kula tartami karaan sadexdan xisbi? Waxay kula tartami karaan 7 maalmood ka hor inta aanay shahaadadaha xisbiyadu burin 26 December.
Doorashada Dastuuriga ah ee Madaxtooyada qaraarka Maxkamadda Sare waxba kama bedelayo in ay ku qabsoonto wakhtigeedii (13ka November 2022) sidii uu ahaa mawqifka xisbiyada mucaaridka oo waafaqsan Dastuurka iyo Xeerka Doorashada Madaxtooyada.
Hadda halka aynu joognaa waa halkaa sida aan u arko.
Soo jeedintii Madaxwaynaha ee khilaafka ka dhex dhaliyay Golaha Wakiilada Maxkamadda Sare kamay gar qaadin balse waxay waafqday in wax ka bedelka Xeer Lam.14 2011 uu yahay sharci sidiisa u dhamaystiran oo aan wax ka qabyo ahi jirin.
Hadaba labada doorasho oo labadaba ay Komishanka Doorashadu qabanayo way adag tahay in ay wada qaban karaan laba bilood oo isku xiga. Sidaa daraadeed ta ay wakiiladu awood u leeyihiin in ay wax ka bedeli karaan maaha ta Dastuuriga ah ee waa ta ururada ee Xeer Lam 14 oo xeer baarlaman ah loo raacayo balse aan wax saamayn ah ku yeelan karin Doorashada Madaxtooyada ee Dastuuriga ah.